Steeti ndị uwe ojii kachasị njọ na Nazi Germany na-agbadata dị ka wolf na uwe atụrụ ma ị hụghị ya: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 14 November 2019	• 21 Comments
Anyi na-aga na steeti ndi uwe ojii nke anyị buru ụzọ tinye iwu ikike site na ịme ihe, ma dozie iwu ahụ. Lawyersfọdụ ndị ọka iwu PsyOp na-akwaga n'akụkụ nke ọzọ na tebụl mgbe ha nwesịrị ọrụ nke imekọ ihe na akparamaagwa (dị ka onye na-agbachitere ndị na-eme ihe nkiri nke enyere ikike itinye aka na iwu ọhụrụ) wee bụrụ onye ọka ikpe PsyOp. Ndị ọka ikpe ndị a nwere ọrụ ịtọlite ​​usoro ikpe ọhụụ, nke enwere ike idozi iwu ahụ.
Bart Stapert bụ ezigbo ezigbo ihe nlele sitere na onye ọka iwu dị otú ahụ bụ onye mbụ nyere ikike inyere onye omekome aka aka ka ọ bụrụ onye akaebe dị okpueze ma nwee ike ikpe mmadụ ugbu a dị ka ọkàikpe. Otu n'ime ndị ahịa ikpeazụ ya bụ Nabil B. bụ onye njikwa okpueze, onye nwanne ya nwoke na-abụghị onye omekome rụrụ arụ na 2018 (dị ka usoro akụkọ ahụ si dị). Nabil B. bụ onye akaebe gbara ama n'oge ikpe banyere ụwa ọgwụ na Amsterdam. Drugwa ọgwụ nke ị nwere ike ịtụle etu US sibu chịa, zụọ ma kee ndị Al Qaeda, yana etu Syria na ọtụtụ agha ndị ọzọ siri wee rụọ ọrụ na ndị agha ọgbaghara iji mebie obodo iji mepụta alibi maka itinye aka na mpụ. Worldwa ọgwụ Amsterdam, nke a na-akpọ Mocro Mafia, nwere ike bụrụkwa ndị agha nchekwa onwe ha. Amsterdam Mocro Mafia bu B of AIVD; ndị nnọchi anya ndị agha nke steeti Dutch, iwebata usoro ndị uwe ojii ọhụrụ. Mepụta ọgba aghara n'onwe gị, nke mere na ị ga - etinyerịrị aka ike.
Mpụ a na-emechite emechi Mocro-mafia kwesịrị ịrụ ọrụ iji hụ na usoro ndị uwe ojii na-atụ ụjọ nke a kpọrọ 'the crown proof' mechara nabata onye ọ bụla. Existencedị adị nke ịgba akaebe okpueze na-enye nchebara echiche na steeti nwere ike ị wepụta akaebe ahaziri maka mpụ ọ bụla. Akaebe enyere maka nke a nwere ike bụrụ ihe anabataghị. A ga-arụ ọrụ ahụ ruo ugbu a na aha akaebe enweghị ike pụta, ma ọ bụghị ya, a ga-egbu ndị òtù ezinụlọ na ndị ọka iwu. Inwere ike ị nweta mmadụ niile nọ n'ụlọ mkpọrọ iji akaebe sitere n'aka onye ama ama ama.
Nke ahụ bụ naanị ihe dị n’ala ala ebe esiri zite ya ugbu a. Don'tchọghị ịhụ nke ahụ? Mgbe ahụ ị ka nwere isi gị n’ájá. Ejigidela ụkpụrụ nke onyeisiala site n'aka onye omekome Willem Holleeder, mana a ga-enwerịrị onye na-eme ihe a ruo n'ókè nke na ọrụ iwu kwadoro ya. Ọzọkwa, ọ bụrụ n’ezie ịchọrọ iwepụ ndị mmadụ ọnụ ala na adịghị mfe, ịchọghị itinye mgbakwunye nchebe niile dị oke ọnụ. Ya mere odi nma ikwere na okpueze okpueze nwere ike ghara idi ebe a na-adighi eme ya. Ọ bụrụ na ọ ga-agabiga, wee dọpụ ngwa ngwa nchebe ndị ahụ dị oke ọnụ n'ụtụ ụtụ isi. Anyị echekwara na ọ bụ maka ịbido ndị omempụ ihe egwu. Mba, o nwere ike zighachi omekome omekome onye sonyere na ederede ihe onyonyo nke omumu ihe uche (PsyOp).
N'otu eme (dị ka akọwara na ihe m gara agaKa ọ dị ugbu a, a ga-agbanwerịrị ego maka mgbachitere (nke ndị steeti chọrọ iwepụ). O nweela nnukwu ego riri nne nye ndị dịka Willem Holleeder. Nke a mere na 'mgbakwunye' yana ya mere ego steeti kwụrụ ụgwọ niile ndị ọka iwu. Ee, nke ahụ bụ kpọmkwem ebumnuche nke ime ihe site n'aka onye omekome a. O riri ọnụ ahịa, yabụ steeti nwere ike ikwu, sị:Nke ahụ agaghịzi ekwe omume. Anyị nwere ike iji ego ahụ maka mmemme nchedo gburugburu onye akaebe okpueze ma ọ bụ onye ọka iwu ya".
Na nkenke, enwere oghere maka ikpuchi ihe niile yana onye ọ bụla steeti nwere ike itinye mpụ na akpụkpọ ụkwụ. Nke ahụ ekwesighi ịbụ mpụ na-adịghị, n'ihi na ịgaghị adị mkpa ịnye ihe akaebe na-akwado ma ọ bụrụ na ịnwere akaebe okpueze. NFI nwere ike ide mkpesa ahaziri iche ma gbaa okpueze na-ahazi ahịrịokwu ndị edepụtara ahazi maka steeti ahụ. Mgbe ahụ ị ga-ackụzu iwu ahụ dum na ịgba ama site na isi gị, n'ihi na ihe niile na-aga na-amaghị ama na-emechi emechi. Mmalite nke ndị uwe ojii ụjọ ahụ! Mana nke ahụ abụghị ihe niile.
Kedu maka iwepụ ndị a na-atụghị uche na ọha mmadụ site na ịkọwa ha? Akọwawo m nke ahụ n'ụzọ zuru ezu na isiokwu a. Ọ dị ezigbo mkpa na ị gụrụ nke ahụ nke ọma ma hapụ ya ka ọ banye n'ime gị. Nke a bụ n'ihi na enwere ike ịmetụta gị taa ma ọ bụ echi. O nwere ike imetu gị aka; o nwere ike imetụta ụmụ gị. O bu ihe eji ejigide ya maka ileba anya n’ihe ndi mmadu nwere ike imehie. Ndị Ruinerwold 'ghost family' PsyOp jere ozi maka nke a. Gụọ akụkọ ahụ na azịza gị ọzọ na ịpị njikọ ahụ.
Anyị na-ahụ ụzọ nọ na-emechi ụdị ihu dị iche iche. Mmemme ịgba ọgwụ mgbochi ji nwayọọ nwayọọ na-abụ iwu. 5G na-abịa. N’ezie anyị na-ahụ nguzogide n’akụkụ niile, mana ọ dịkwa mkpa na ị hụrụ ugbu a na steeti n’onwe ya na-ahazi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmegide ahụ. Ọtụtụ ngagharị iwe bụ maka ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mana ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ahụ nọ naanị maka ebumnuche 1 na nke ahụ bụ: kwaba ihe niile n'ime ụgbọ elu.
Ebumnuche nke nguzogide onwe ha bụ, n'otu aka, izochi nsogbu ndị bụ nsogbu site na ịgbanye ntị ma hụ na ihe anaghị esite n'aka. Ọ bụ ihe niile gbasara ịme mmegide site na otu. Ọ bụrụ na ịnwere ike iziga nke ahụ n'onwe gị, ịnwere ike izipu ụgbọ mmiri ahụ gaa n'ikpere mmiri. N’imem akwụkwọ ọhụrụ M kọwakwuru banyere otu esi emegide mmegide a na-achịkwa yana otu esi adị nhazi nke aghụghọ niile. Ọ dị ezigbo mkpa na ewepụtara ozi a taa. Oge eruola ka ị were ihe gị ma dobe ezinụlọ gị, ndị ịmara ma ọ bụ ndị enyi gị. Anyị enweghị ike ichere ọzọ. Ọnụ ụzọ nke ndị uwe ojii steeti na-emechi na ihe niile na-eme na jaket enyi nke 'nlekọta' na 'enyemaka'.
Ihe nkiri mkpọsa nke dị n'okpuru gosiri etu e sirila nweta ogige ịta ahụhụ (nke bụ ọgaranya ugbu a na Netherlands). Ọfụma na-eme ihe, na-enye echiche na ọ bụ ihe niile na-adịghị mma n'anya ma na-egosi mmetụta. I jiri nke a mee ihe na ndị na-eme ihe nkiri na ọmarịcha ọkụ nke ụlọ mkpọrọ gị yana ọmarịcha mmepụta nwoke nwere ọchịchịrị gbara ọchịchịrị. (Lee ma guo n'ihu n'okpuru vidiyo)
Achọrọ iwu "40 /" 45 iji gosipụta akụkụ siri ike nke fasizim. Mgbe agha ahụ gasịrị, ngọngọ nke nyeere aka na ịkwado Adolf Hitler bụ naanị aka na ntinye nke otu Bilderberg, nke onye isi nke anyị Bernhard guzobere. E nyere Hitler ike ịkpa ike tupu oge eruo ka o wee nwee ike wepu ubi ahụ ọzọ dị ka ezubere, ka otu ike dị n’azụ ịrị elu na ọdịda ya nwee ike ịkwakọ otu ụkpụrụ isi ala nke ọchịchị onye kwuo uche ya na nke jaketị. Emere ụzọ a gafere na EU super steeti na nzukọ ndị mbụ nke Bilderberg.
Ọtụtụ iri afọ agafeela, ma ogige ịta ahụhụ na agụmakwụkwọ dị njikere iji jupụta onye ọ bụla na-ekwenyeghị n'echiche nke nkwenkwe ụgha. N'oge na-adịghị anya, ndị ahụ ga-abụ ndị ahụ ejikọtara na akara aka dị mma (Bekee: 'right-nku') site na njikwa ejiri nlezianya mepụta ya na ndị jikọrọ ya na ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-enwu ọkụ nke mepụtara ụdị ahụ. Na isiokwu a Akọwaara m otu njikọ ahụ na Donald Trump, Boris Johnsen na (na Netherlands) ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị ka Thierry Baudet si mee. N’imem akwụkwọ ọhụrụ Aga m akọwa ihe banyere nke a. Site na imepụta ọrịa ịba ụba n'oge na-adịghị anya na ịmepụta ọgba aghara, ị nwere ike imeso otu ahụ dum na 1x. Site ugbu a gaa n’ihu, iche echiche siri ike bụ ihe chọrọ agụmakwụkwọ. Then ga-enwe nsogbu ọghọm ọghọm ọghọm. Ee n'ezie! Ezubelarị nkọwa nke "nsogbu ahụ". Na psycholances adịlarị ebe ahụ dị njikere.
Oge eruola ka ị hụ ihe na-eme gburugburu gị. Iwu niile na iwu niile adịghị ebe a iji chebe gị, kama iji kpuchido nkwenkwe ụgha fascist (na uwe mara mma: anụ wolf na uwe atụrụ) megide gị; megide ndi Israel. Ndị mmadụ ewepụtala oge zụọ ọgbọ nke ‘ndị na-elekọta’ na ‘ndị uwe ojii’. E kwuwerị, ndị nwere ntorobịa nwere ọdịnihu ma ọ bụrụ na ịmalite ịmalite ụbụrụ n'oge, ị nwere ike itinye ndị agha niile nke 'ndị na-elekọta' na 'ndị nnọchianya' ndị kwenyesiri ike na ọ dị mma igbachi ndị ahụ niile. Onwe mkpochapu anya n'ihi otutu ihe mmemme site na, mmuta, usoro mgbasa ozi na ime ihe sitere na ndoro-ndoro ochichi. Oge eruola ka ị hụ ebe aghụghọ niile dị. Achọrọ m ịkpọ gị ngwa ngwa, akwụkwọ m gụọ ya ma nye ya ndi ezinulo, ndi enyi ma obu ndi enyi. Ọ dị na mpempe akwụkwọ na mpempe akwụkwọ adịghị mfe nyocha.
N'ikpeazụ vidiyo dị n'okpuru. N'ime ya ị na-ahụ otu n'ime ọtụtụ fencing nke Europe wuru iji chebe onwe ya megide ndị mwakpo ahụ niile. Ana m atụ aro ka ị lelee vidio dị n'okpuru wee chee ma ụbọchị aga - abịa mgbe ị ga - agbaga ọchịchị onye fasizim, mana ị gaghị aga ebe ọ bụla, n'ihi na ebe ahu nile di ebe ahu di a na-enyochakwa osimiri niile na ụgbọ mmiri ndị na-eche nche n'ụsọ osimiri, drones na helikopta. You ga-ekwenye aka ma ọ bụrụ na ọgụgụ isi abịa n'ihu? Will ga-ewere ngwakọta ọgwụ ọgwụ eji edozi ahụ nke ọma tupu ị nweta nri gị site na ọnụ ụzọ ụlọ? Ka ì chere na ọ gaghị aga ọsọ ọsọ?
Ndepụta njikọ njikọta: https: nporadio1.nl
Tags: ọkàiwu, Bart, German, EU, agba, fencing, enyemaka, ịgba akaebe okpueze, Nabil B., Nazi, akparamaagwa, Stapert, elekọta
14 November 2019 na 10: 53
Kọwaa ihe ederede ọzọ Martin, ọ bụ ihe nwute na ọtụtụ ndị mmadụ anaghị ahụ oke mkpa. Ọ bụrụ na ọ ga-anọ ọdụ ma ụgbọ elu na-agaghịzi ekwe omume, ha ga-ekwu ... olee mgbe bụ ihe niile kpebiri na anyị ahụbeghị ya ka ọ na-abịa. Nkwupụta ziri ezi bụ mgbe ahụ ... Anyị achọghị ịhụ ka ọ na-abịa. Ọ gaghị emetụta gị, echere m na ịdọ aka ná ntị zuru ezu.
14 November 2019 na 19: 06
Anyị ga-eji eziokwu na ndị uwe ojii nwere ike wakporo ebe ọ bụla. Na-eche nche nke ọma na mgbe niile na nnukwu ihe kpatara nke .. Ma ọ bụ, ọ nwere onye na-eyi ọha egwu na ụgbọ oloko ahụ ma ọ bụ onye si Mocro Mafia .. Grapperhaus ga-abịa ọzọ (n'azụ ụdị 65 ochie agbata obi ọwụwa anyanwụ-iko) na ebumnuche siri ike:
14 November 2019 na 19: 16
Egwu egwu porn .. Agha ebighi ebi maka udo ebighebi. Ka ha hapuga umuaka ndia, uwa anyi noo nke oma. Ebee ka anyị gaara anọ ma ọ bụrụ na ha anọghị ya?
15 November 2019 na 21: 53
Ihe ndi ozo! Enwekwu ndị uwe ojii maka na ọ dị ezigbo mkpa !!
14 November 2019 na 10: 56
You nweghị ike ịpụ apụ ma emechaa ...
15 November 2019 na 11: 25
Ee ee bụ atụmatụ ahụ, ya na EUROGENDFOR na Von der Leyen nọ n'ọnọdụ ya dịka onye bụbu Verteidigungsministerin. Macron, Tusk na ụmụ nkịta ndị ọzọ si na Politburo na-ajụ ajụjụ maka ihe owuwu NATO ugbu a wdg
Wir kämpfen: für Deutschland! Na otu nnukwu Europe (gụọ nke anọ Reich)
14 November 2019 na 16: 05
Dịka m siri hụ ya, anyị abanyelarị n'ọchịchị aka ike, steeti ndị uwe ojii. Ugbua. Ugbu a gaa lee lee ihe akpọrọ ikike, akara ngosi iwu ị kacha kpọọ ha, kpọkuo ha, nnwere onwe ikwupụta, dịka ọmụmaatụ. Gha achoputa n’omume na imaghi ikwuputa ihe nile. Ma ọ bụrụ na i guzo n’ihu nwa nwoke site na edemede ahụ, a ga-emebi ikike gị ma ọ bụrụ na nsonaazụ ya adabaghịrị ụmụ nwoke ahụ, emegideghị iwu ụmụ nwoke. Akpọghị ndị pịa ebe a ma ọ bụrụ na ọ ga - ekpuchi ekpuchi. . Enwere otutu ikpe ụmụ nwoke site na onye edemede edemede bụ ndị ezighi ezi n'eziokwu na iwu. Nke ahụ bụ ọchịchị aka ike, nke ahụ bụ ịka ike karịa, ọ bụghị n'aka iwu. Boysmụ nwoke sitere na ndị ọka iwu edemede maara nke ahụ, mana ha bụ akụkụ nke ụmụ nwoke ahụ sitere na ọnọdụ edemede ahụ ha nwetara, ha nwetara ya. Kedu ihe ị ga - eme banyere ụmụ nwoke site na nkwupụta edemede. N'arịrịọ, mkpesa? Ole onye ka ị na-ezute n’ebe ahu umu nwoke site n’ikpe edemede Gbalịa Courtlọikpe Na-ahụ Maka Ihe Ruuru Mmadụ na Europe na Strasbourg. Ee, ha bu kwa umu aka ndi si edemede. Ha na-ekpebikwa ihe niile n'aka ha site na iji kọwaa ma ọ̀ dị na mmasị ha. Ọ bụrụ n’ị na-eme ihe megidere nwata nwoke site na edemede nke ndị ọzọ, ọ ga-efu gị n'ezie. Nke ahụ bụ n'ezie ọchịchị aka ike gbasara ụmụ nkịtị n'ihi ụmụ nwoke.
14 November 2019 na 16: 39
Ekwenyere m ... na ihe kachasị mkpa bụ ịhụ site na aghụghọ niile. N'ihi ya akwụkwọ ahụ.
14 November 2019 na 16: 53
Nwanne Nwanyị Naomi Hoogeweij enweghị ike ichere ... institutiondị ụlọ ọrụ a nwere ndị na-eme mmụọ obi ụtọ, sociopaths na ndị na-efe ya yiri.
14 November 2019 na 18: 49
Ọ́ bụghị naanị ezigbo ọrụ? Kedu ihe ị na-enye nsogbu? Ọ bụ "nlekọta"! N'ezie!
14 November 2019 na 19: 50
Ọ na-akwụkwa ụgwọ nke ọma! Nwere ike ịzụta ọmarịcha ụlọ. Ọnọdụ ụlọ ọrụ dị mma na ihe ndị ọzọ.
14 November 2019 na 20: 02
Ee, Aghọtaghị m ụdị nsogbu ahụ! Ndị ọrụ na madurodam bụ ezigbo ọrụ, ọ nweghị ihe na-echegbu about
5 December 2019 na 01: 28
14 November 2019 na 19: 52
“Nlekọta transcultural” abụghị ebe mara mma maka Naomi Hoogewij ma? O nwere ihe ya na trans ..
14 November 2019 na 20: 25
Dịka ị kọwara n’akwụkwọ gị, enwere nsu gburugburu ihe mbụ site na mbido (n’ime ụwa abụọ a). O meela ihe niile tupu mgbe ahụ, anyị nwere ike ịhụ ka ọ na-abịa ọtụtụ kilomita ugbu a. Ọ bụghị naanị ọnụ ụzọ ámá ka a na-ewu, kedu maka nhazi usoro visa? Emeziela ihe ndị a na afọ ndị na-adịbeghị anya ka ọ sie ike / na-agaghị ekwe omume ịpụ. Ọ na-amalite site n'ụtụ isi ụgbọ elu ma nzọụkwụ ọzọ bụ ajụ.
Dịka Zonnetje kwuru, ọ dabere na porn na-atụ egwu. N’agbanyeghi na ha tinyere anyi n’ime onu kacha nta, o buruha na mbu anyi mara na anyi enwerela onwe anyi, ihe nile n’uwa a na eme.
Na mgbakwunye, m na-ahọrọ ka ha tinye m n'ime ụlọ karịa nke m tinyere mmadụ n'ime ụlọ. Nke ahụ bụ ọdịiche dị n'etiti onye ụwa a ma ọ bụ onye na-eduzi ya!
Ọ bụrụ na ọ merie ebe a, ị ga-ebili karịa ihe niile.
14 November 2019 na 22: 31
Ee e, anyị niile dị aghụghọ. Steeti ahụ nọ ebe a iji chebe ụmụ amaala ya. Ma ọ bụla ugbu a, mgbe ahụ ọ na-ada. Eninggbasochi iwu na usoro iwu sochirinụ bụ maka ọdịmma nwa amaala…
15 November 2019 na 00: 02
Batman ee .. ọ bụ n'ezie hilarious! Ihe ojoo b fim na-eme nke oma n’okpuru ndi otu.
15 November 2019 na 07: 32
@ Anyanwụ, i tinyela ya n'eziokwu, ị zuru eziokwu.
Anyị niile nwere ike ịhụ ihe na-eme, mana dịka ụmụ amaala nkịtị ị nweghị ike imerụ ihe banyere ya.
Anyị nwere ike kpebie na anyị agaghị enye onyinye, ọ bụghị ịtụ vootu, ọ bụghị ịrụ ọrụ na-emebi onye ọzọ na nke ahụ bụ ihe ..
Ntughari, ịgba akwụkwọ, na ịrịọ arịrịọ,? Onye na-egbu anụ na-enyocha anụ nke ya, onye na-ekpebi ụgwọ ọrụ.
Bidoghi ihe ndi mmadu megide edemede a.
15 November 2019 na 07: 46
Aga m asị: oge ​​ị ga-agụ akwụkwọ ahụ wee hụ ọzọ na ọ dị mma karịa ka ị na-eche. Nwere ike n'ezie ime ihe!
15 November 2019 na 12: 34
Ihe m akọwapụtaworo banyere ụmụ nwoke na edemede ahụ bụcha eziokwu. N'ezie nke a apụtaghị na enweghị ike ime ihe ọ bụla banyere ya. Bido ịchọpụta ma ihe adịghị mma, ezighi ezi, ikpe na-ezighi ezi. Nweta mmetụta uche ma ewepụkwala ha. Mee ka uche gị dị na ya. Ekwela ka ihe iwe gi ju gi obi. Mụ nwoke ahụ enweghị mmetụta uche, a ga-emerịrị ike niile, ume. Ha na-aga agha. Ọ bụrụ na ekwuru ihe ma ọ bụ mee, ebe ọ bụla ma ọ bụ site na onye ọ bụla, gbalịa ịchọpụta ma ozi ahụ sitere na isi iyi ụmụ nwoke na edemede ahụ. Mee otu ndi mmadu gi na ha na emekorita ma juo onwe gi, nke a bukwa otu n’ime umuaka ndi ahu. Gbalịa ịgwa ndị nwere ụdị mmụọ ahụ otu ihe, otu ihe, ma gbaa ibe ha ume ma kọwaa ihe mere anyị ji nọrọ n'ọnọdụ a. Lezie anya n'ihi na ụmụ nwoke na-ekpuchi onwe ha dị ka ndị nwere ụdị echiche! Ha bu ezigbo chamaleons.
Enwere ọtụtụ ihe ikwu banyere ha mana ha gụpụtara na saịtị a.
19 November 2019 na 00: 17
Ihe atụ ọzọ dị ukwuu nke nsogbu, mmeghachi omume, ngwọta.
A na-akọ egwu dị oke egwu n'oge ụfọdụ egwuregwu bọọlụ na akụkọ. A na-ekwu egwuregwu PRS n'otu ume.
Nsogbu: chants mana enweghi ike ịmata ya nke ọma
Mmeghachi omume: ihere! A ga-ekpe ndị ahụ ikpe!
Ngwọta: iwebata ihu na ihu na egwuregwu bọọlụ
Hụ mgbasa ozi nke mmemme ahụ "otu taa" nke 18-11-2019 site na nkeji 4 n'okpuru: 20
Ọ ga - abụ ihe ndabakọ na uwe nke "ọkachamara" na - echetara m otu gorilla ??? M ka nwere ike ịghọta na ọchị ahụ :-p
" Robert Jensen "Donald Trump ekweghị na New World Order" na-egosi: Jensen.nl bụ ndị mmegide na-achịkwa
UN manifesto '90 na-egosi: usoro amuma iji chebe gọọmentị ụwa »
Nleta nile: 14.676.112